Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Turkiga oo Gudaha Ciraaq Galay & Dawlada Ciraaq oo Cambaaraysay Falkaas.
Ciidanka Turkiga oo Gudaha Ciraaq Galay & Dawlada Ciraaq oo Cambaaraysay Falkaas.
Cutubyo katirsan ciidamada dawlada Turkiga ayaa gudaha u galay gobalka Ninawa (Musil) ee waqooyiga Ciraaq. Talaabadan ooy xukuumada Ciraaq ku sheegtay mid lagu soo xad-gudbay madax-banaanideeda aadna u cambaaraysay.
Ciidamada Turkiga ayaa horay u joogay bilihii lasoo dhaafay dhulka Kurdida ee waqooyiga Ciraaq ooy xidhiidh wayn leeyihiin. Waxaana la sheegay inay hada usoo gudbeen dhanka nawaaxiga magaalada Musil oo hada xarun u ah kooxda ISIS (Daacish). Gaadiidka dagaalka iyo ciidamada Turkiga ayaa la sheegay inay weheliyaan ciidamo ka socda Kurdida iyo waliba Jabhadaha Sunnida ah ee kasoo horjeeda kooxda ISIS.
Gudoomiyaha gobalka Musil ee dalka Ciraaq Atheel Nujaifi ayaa la sheegay inuu isaga casumay ciidamada Turkiga inay gacan kasiiyaan la dagaalanka ISIS. Balse Ra’isulwasaaraha Ciraaq Xaydar Al Cabadi ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in Turkiga kusoo xad-gudbay xaduuda iyo madax-banaanida wadanka Ciraaq.
Xukuumada Baqdaad iyo dawlada Turkiga ayaa horay uga dhaxaysay xurguf laxidhiidha dhanka Shidaalka Turkiga kagato ismaamulka Kurdida ee Ciraaq, ganacsigaasi oon wax dhaqaale ah kasoo galin xukuumada Baqdaad.
Imaanshaha ciidamada Turkiga ee gobalka Musil ayaa sidoo kale caqabad ku ah qorshihii dawlada Ciraaq oo iyadu taageero ka hesha dalka Iran iyo Ruushka, arrintan oo markale sii adkayn doonta xidhiidhka u dhaxeeya dalalkaasi.